Barograph: waa maxay, astaamaha, shaqada iyo muhiimadda | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | | Qalabka Saadaasha hawada
Cadaadiska cimilada ayaa ah wax aad muhiim u ah in lagu xisaabtamo saadaasha hawada haddii aan rabno inaan saadaalin wanaagsan samayno oo aan barano hab dhaqanka cimilada. Dhammaan dhacdooyinka jawiga iyo saadaasha hawada waxaa shuruud ku leh isbeddelada ku yimaada cadaadiska Hawada. Maaddaama aysan ahayn wax la taaban karo, way adag tahay in la barto cabbiraadda cadaadiska Hawada. Waxaa jira dhowr qalab saadaasha hawada oo cabbiri kara qiimayaashan. Mid ka mid ah ayaa ah barograph.
Maqaalkani waxaan kuugu sheegeynaa dhammaan sifooyinka, hawlgalka iyo muhiimadda barograph.
1 Muhiimadda cabbirka cadaadiska Hawada
2 Diiwaanada ku jira barograph
3 Barograph iyo barometer
4 Xiriirka lala yeesho ifafaalaha saadaasha hawada
Muhiimadda cabbirka cadaadiska Hawada
In kastoo aysan u muuqan, hawadu waa culus tahay. Kama war qabno culeyska hawadda tan iyo markii aan ku dhex quusnay. Hawada ayaa bixisa iska caabin marka aan soconno, orodno ama aan raacno gaari, maxaa yeelay, sida biyaha oo kale, waa dhexdhexaad aan dhex marno. Cufnaanta biyuhu aad ayey uga badan tahay tan hawadaTaasi waa sababta biyaha gudaheeda ay noogu adag tahay inaan ku dhaqaaqno.
Barografku waa aalad ka caawisa bixinta akhris joogto ah oo ku saabsan cabbirka qiyamka cadaadiska cimilada. Baaragaraafku waa aaladda lagu qiimeeyo qiimayaasha laga helo barometerka. Qalabkan waxaa lagu dhex daray barograafka iyo akhrinta qiimayaasha laguma helin meerkuri. Waxay ku saleysan tahay aqrinta ay heshay burburin soo saarta cadaadiska jawiga ee lakabyada dhuuban ee biraha sida qaab dhululubada
Si looga hortago cadaadiska inuu waxyeeleeyo dhismaha barometeriga, ilo cabirkoodu yar yahay ayaa lagu dhex daray ka hortaga in kaabsulka cabbiraadda la jajabiyo. Qalin ayaa la dul dhigi karaa dusheeda, taas oo mas'uul ka ah hagida durbaanka wareega. Durbaankan ayaa mas'uul ka ah wareejinta si markaa warqadda qalin jabisay loo dhaqaajin karo maylkuna wuxuu u kuur galayaa qiimaha cadaadiska cimilada ee warqadda. Thanks to isticmaalka barograph-ka waa suurtagal in la ogaado lana ilaaliyo si faahfaahsan isbeddelada kala duwan ee isdabajooga ah ee loo yaqaan 'barometer'. Intaa waxaa dheer, waan ogaan karnaa qiimaha cadaadiska cimilada.
Diiwaanada ku jira barograph
Marka jawigu deggan yahay, saadaasha hawada waxaa loogu yaqaanaa dhiiqo barometric ah. Halkan waxaa loola jeedaa goorta garaafyada lagu qiimeeyo isbeddellada togan ama taban. Halkani waa meesha isbeddelada cimilada loo gudbiyo marka mid ka mid ah isbeddeladani si lama filaan ah ugu muuqdaan. Si sahal ah ayaad u turjumi kartaa meelaha sare oo sidoo kale loo yaqaan ilkaha la arkay.
Hawlgalka qalabkani wuxuu ku saleysan yahay cilladaha kala duwan ee hoos u dhaca leh faakuum gudaha ku jira oo xasaasi u ah isbeddelada cadaadiska jawiga. Sidan oo kale, waa la isku cadaadin karaa marka ay jiraan cadaadis sare oo la fidin karo marka ay jiraan cadaadis hoose. Dhaqdhaqaaqeeda waxaa gudbiya nidaam kabaal ah oo ku xiran gacan mas'uul ka ah duubista xogta qalin. Qalinku badanaa waa nooca qaadada wuxuuna ku yaalaa dhamaadka. Diiwaangelinta waxaa lagu sameeyaa rullaluistemadka ku wareegaya dhidibkiisa iyadoo ay ugu wacan tahay farsamaynta saacadda gudaha.
Waxaa jira noocyo qaar ah, oo kuxiran cabirka rullaluistemadka, socon kara wax badan ama kayar. Moodooyinka badankood waxay badanaa socdaan hal toddobaad taas waa intee in le'eg ayay ku qaadataa qalinku inuu khadkiisa u adeegsado oo uu wax walba ugu qoro.
Waa wax caqli gal ah in laga fikiro in hadii cadaadiska cimilada ay sabab u tahay culeyska hawadu ka jirto meel cayiman oo dhulka korkiisa ah, waa inaan u qaadano in halka dhibicdu ka sareyso uu yahay, cadaadiska hoose uu noqon doono, maadaama qadarka hawo halkii kor ku xusan. Cadaadiska Hawada waxaa lagu cabiraa sida xawaaraha, miisaanka, iwm. Waxaa lagu cabiraa jawiga, millibars, ama mm Hg (milimitir meerkuris ah). Caadi ahaan cadaadiska jawiga ee ka jira heerka badda waxaa loo qaadaa tixraac ahaan. Halkaas waxay ku qaadataa qiime 1 jawi, 1013 millibars ama 760 mm Hg iyo litir hawo ah oo culeyskiisu yahay 1,293 garaam. Unugga ay inta badan adeegsadaan khubarada saadaasha hawadu waa kan loo yaqaan 'millibars'. Dhamaan qiimayaashani waxay ka diiwaan gashan yihiin barograafka.
Barograph iyo barometer
Dhab ahaan, si loo cabbiro cadaadiska jawiga, barometer-ka ayaa la isticmaalaa. Waxaa jira barometerro noocyo kala duwan ah. Tan ugu wanaagsan ee la ogyahayna waa barometerka meerkuriga ee uu allifay Torricelli. Waa tuubo U-qaabeysan oo leh laan xiran oo faaruqinta lagu soo jiiday, sidaa darteed cadaadiska qaybta ugu sarreysa ee laantani waa eber. Sidan oo kale, xoogga ay hawadu saarto tiirka dareeraha ah waa la cabbiri karaa oo lagu cabbiri karaa cadaadiska Hawada.
Cadaadiska cimilada waxaa u sabab ah culeyska hawadu ka leedahay meel cayiman oo dhulka dushiisa ah, sidaa darteed, kolba halka ay ka sareyso ayaa ah, cadaadiska hoose ayaa noqonaya, maaddaama ay yar tahay hawo jirta. Waxaan dhihi karnaa in cadaadiska Hawada uu hoos u dhacayo joogga sare. Tusaale ahaan, buur, xaddiga hawo ee qaybta ugu sarreysa way ka yar tahay tan xeebta, taas oo ay ugu wacan tahay kala duwanaanta dhererka.
Cadaadiska ayaa ku yaraanaya dhererka sida caadiga ah. Markasta oo aan sare u kacno sarajoogga, waxaa yaraanaya culeyska aan heysano iyo awood yar oo ay hawadu nagu heyso. Waxa caadiga ah waa inuu kudhaco heerka 1 mmHg 10 kii mitir ee joog ah.
Xiriirka lala yeesho ifafaalaha saadaasha hawada
Sidii aan horay u soo sheegnayba, cadaadiska Hawada waa mid ka mid ah is-beddelayaasha ugu muhiimsan ee saadaasha ifafaalaha saadaasha hawada. Roobab, dabaylo, duufaano, iwm. Waxay la xiriiraan heerarka cadaadiska Hawada. Isla mar ahaantaana, Qiyamyadani waxay si toos ah ula xiriiraan dhererka aan joogno iyo xaddiga shucaaca qorraxda ee dhacay. Waa falaaraha qorraxda ee soo saara dhaqdhaqaaqyada cufnaanta hawadu kiciso dhacdooyinka kala duwan ee jawiga ee aan ognahay.
Sidaa darteed, muhiimadda ay leedahay cabbirka cadaadiska Hawada iyo isticmaalka barograph iyo barometer ayaa lagama maarmaan u ah saadaasha saadaasha hawada.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto astaamaha iyo adeegsiga loo yaqaan 'barograph'.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Qalabka Saadaasha hawada » Barograph
Saamaynta Fata Morgana